Crimp suunka silig
Cable Ribbon Flat
Fiyuuska suunka Holder
Switch suunka Wire
Qaar kale taararka la habeeyo
isku xira USB
madax pin Female
IDC isku xira
Qaar kale waxay isku xira
PH 2.0 taxane
FAQs loogu talagalay Soo-saareyaasha
Haddii aad qabto wax su'aalo ah, waxaan leenahay jawaabo. Laga soo saarka si ay u suuq-geynta iyo oggolyahay.
Ma waxaad u bixisaan shaybaarka baaritaanka?
Ka dib markii xaqiijin qiimaha, aad u baahan kartaa saamiyo si loo hubiyo tayada our.
Haddii aad u baahan tahay tijaabada, waxaan kuu soo diri karaa tijaabada by free (ku xiran tahay noocyada iyo qty ee shaybaarka) ama aad ku bixin kartaa kharashka tijaabada.
Muddo intee leeg ayaan ka filan karto si aad u hesho tijaabada?
Ka dib marka aad bixiso lacag muunad iyo waxaan xaqiijin sawirka leh kasta oo kale, tijaabada diyaar u 1-5 maalmood noqon doonaa.
Si Sample lagu keeni doonaa by UPS / oogeen / FedEx, taas oo qaadan doona 4-5 maalmood oo shaqo in bixinta. Waxaad isticmaali kartaa xisaab warqaadayaal adiga kuu gaar ah ama noo prepay haddii aadan lahayn xisaab ah.
aad sameyn karto OEM / ODM inoo furayay?
Haa. Waxaan si diiran u soo dhaweynayaa amar OEM iyo ODM, Annagu waxaannu nahay saaraha xirfadeed oo ku saabsan suunka silig, shirkii cable iyo Xidhiidhiyayaasha PCB, warshad leh in ka badan 12 sano OEM ama ODM waayo-aragnimo.
Maxaa ku saabsan waqtiga hogaanka saarka mass?
Daacadii, waxay ku xiran tahay tirada amarka iyo xilli aad meel amarka. Markii ugu sunta rasaasta ee MOQ 5 ilaa 15 maalmood waa. Guud ahaan, dhammaan alaabta la dhammeeyo kartaa 4 todobaad gudahood.
Waxaan nahay aqbali EXW, FOB, CIF, iwm Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah taas oo ah ugu haboon ama ugu kharash-ool ah aad loogu talagalay .
Ma leedahay damaanad?
Haa, waxaan ku siin hal sano damaanad.
Waa maxay farqiga u dhexeeya shirkii cable ah iyo suunka silig a?
Wire la habeeyo
Wire: kaari hal A (sida caadiga ah ka sameeyey naxaas ah ama aluminium). Fiilooyin yihiin iska caabin yar yahay, kharash yar, oo wuxuu qiyaasay by "eeg". The yar eeg, oo ka sii dhumuc weyn ee silig. The sii dhumuc weyn silig, sii badanaya halista ah ee dhaawaca ka dhashay fiyuuska la gubo.
Cable: Laba ama in ka badan kirishbooyada duudduubay jaakada hal. Fiilooyinka intooda badan ka kooban silig wanaagsan qaada hadda korontada, silig dhexdhexaad ah in dhameystiraya loop korontada iyo silig grounding ah.
Sida loo astaysto suunka silig ama shirka cable?
Kooxdayada warshad wada kooxda macaamiisha dubbaridi doonta, haddii ay macaamiisha siin kartaa sawirro dhab ah iyo sawiro la xiriira tixraac kaas oo noqon doona badan oo waxtar u leh ahaanayta.
Sidee ku saabsan xeerarka compliancy?
Inta badan qalabka our cayriin inta badan waa lready waafaqsaneyn xeerarka hadda, taasoo la micno ah in aad awoodo in uu kaa yareeyo khatarta xeerarka compliancy (ISO 9001, ISO 14001, gaari ... iwm)
Ma waxaad u privde maaddooyinka / alaabta ceeriin inay dhexgalaan ama ayaan?
Tani waxay ku xiran tahay baahida gaarka ah adiga kuu gaar ah. Shirkadaha qaar ayaa jeclaan lahaa in uu asagu geedi socodka dhamaystiran oo soo saara kimikooyinka, oo ay ku jiraan iibsiga ee maaddooyinka / alaabta ceeriin, qaar kale ay doortaan in ay siiyaan naftooda Cuntadan. A saaraha toll wanaagsan wuxuu qaadanayaa hab shaqaynta baahida ganacsi.
Floor 2, dhismaha 5, changxing teknoolojiyad sare park warshadaha, tuulada shayi, shajing magaalada, baoan degmada, magaalada Shenzhen, gobolka Guangdong